Turkiga: “Dilkii Khashoggi waxaan u haynnaa caddaymo maqal iyo muuqaal oo naxdin iyo murugo leh” – Radio Daljir
Oktoobar 12, 2018 6:13 g 0
Wararka illaa iyo shalay laga helayo sirdoonka Turkiga iyo kuwo ay maanta sheegeen saraakiil sare oo ka tirsan dowladda Turkiga, iyo waliba maqal iyo muuqaaloo lala qaybsaday danbi-baarayaal dowladda Mareykanku ay u soo dirtid in ay wax ka ogaadaan dilka Jamaal Khashoggi, ayaa sheegaya in dowladda Turkigu ay hayso maqal iyo muuqaalo ka tarjumayo sida loo dilay Jamaal Khashoggi.
Xubno danbibaarayaasha Mareykanka oo si hoose ula hadlay warbaahinta CNN ayaa sheegay in ay dhegaysteen oo muuqaal ahaanna u arkeen dilka fooshaxun ee loo gaystay Jamaal Khashoggi. “Wax la qaadan karo ma aha, waana foolxumo iyo hoog sida laga yeelay Jamaal Khashoggi,” ayey CNN u sheegeen xubnahaas.
Dowladda Turkiga ayaan innaba ka hadlin sida ay ku heshay maqalka iyo muuqaalada dilka Jamaal, ayada oo sida la soo warinayo ka cabsi qabta in la ogaado sida ay u basaasto safaaradaha shisheeye ee ka hawlgala dalkooda.
Dowladda Sucuudiga ayaa ayadu si toos ah u beenisay dilka Jamaal Khashoggi ayada oo afhayeen u hadlay uu yiri, “Jamaal waa soo galay qunsuliyadda, hawshiisii buu dhammaystay, waana baxay.”
Illaa iyo hadda lama hayo, dowladda Sucuudiga ayana ma ay soo bandhigin, wax muuqaal ah oo ka turjamaya Jamaal Khashoggi oo ka sii baxaya safaaradda.
Jamaal Khashoggi ayaa sidii uu duhurkii maalinkii Talaado, 2 Aktoobar uu u galay qunsuliyadda Sucuudiga aan weli ka soo bixin. Laba saac kabacdi markii uu Jamaal qunsuliyadda galay waxaa qunsuliyadda ka baxay gawaari wada muraayado madoow oo abbaaray dhanka deegaanka qunsuliyadda oo 500 tallaabo u jirta isla qunsuliyadda.
Xaaska Jamaal Khashoggi oo albaabka hore ee qunsuliyadda ku sugaysay waxa ay sheegtay in Jamaal sidii uu qunsuliyadda u galay uusan ka soo bixin.
Warbaahinta Washington Times oo Jamaal ka ahaa qoraa wargeyska ayaa sheegtay in dowladdu Turkigu ay ku wargalisay in 15 sarkaal oo Sucuudigu soo diray ay masuul ka yihiin dilka Jamaal, ayna u dileen si naxariista ka fog.
“Waxaad maqlaysaa codkiisa iyo codad kale oo af Carabi ku hadlaya oo ku bilaabmaya asaga oo loo waraysnayo sida danbiilihii; waxaa ku xiga codad asaga oo la jirdilayo oo si xun loo ciqaabayo; waxaana maqalku ku dhammaanayaa asaga oo si naxariista ka reebban loo dilayo,” ayuu yiri qof dhegaystay maqalka lala wadaagay.
Dilka Jamaal Khashoggi oo adduunka oo dhan ka dhiidhiyey ayaa hadda waxaa isa soo taraya cadaadis ka dhan ah Sucuudiga iyo durbaanka in cunoqabateyn hub iyo mid ganacsiba lala beegsado dowladda Sucuudiga.
Richard Branson oo ah bilyineer Ingiriis, kuna hawlanaa mashruuca hormarinta Sucuudiga ee “Davos in the Dessert” rabeyna in uu $1 bilyan USD maalgashado Sucuudiga ayaa hadda sheegay in uu maalgashigaas joojinayo. Warbaahinta CNN iyo kambaniyaal kale ayaa ayana ka baxday in ay qayb ka noqdaan mashruucaas iyo maalgashigiisa.
Dowladda Mareykanka ayaan illaa iyo hadda ku dhawaaqin wax tallaabo ah oo ay la beegsanayso hoggaanka Sucuudiga Amiir Maxamed bin Salmaan.
Dowladda Imaaraadka Carabta ayaa iyana sheegtay in waxa oo dhan ay tahay dacaayad raqiis ah oo lala beegsanayo Boqortooyada Sucuudiga.
Dowladda Turkiga ayaa ayadu si taxaddar ku dheehanyahay u abbaaraysa arrinkaan, ayada oo maalinba macluumaad cusub bannaanka soo dhigeysa. Arrinkaas ayaa lagu macneeyey in uu yahay istaraatajiyad ay Turkigu rabaan in ay Sucuudiga ku khasbaan in uu arrinkaan si toos ah u wajaho haddii kale macluumaadka ku saabsan dilka qunsuliyadda dhexdeeda loogu gaystay Jamaal Khashoggi ayey Turkigu bannaanka soo dhigayaan.
Illaa iyo hadda lama hubo sida uu Amiir Maxamed bin Salmaan arrinkaan u wajahi doono.
Siyaasadda & Dhaqaalaha 476 Wararka 19730